डरलाग्दो, कति वैध अंकहरू छन्। केही समय अघि मैले केही अफिसका मानिसहरूलाई उनीहरूको प्रस्तुतीकरण सुधार गर्न मद्दत गरें। अचम्मको कुरा कतिलाई लाग्छ कि प्रत्येक बोलिएको शब्द वास्तवमै स्क्रिनमा हुनुपर्छ?
धेरै जानकारी भएका ग्राफहरू मात्र राम्रो ग्राफहरू हुन्?
कम्प्यूटरमा कति टाइपफेसहरू छन् भनेर सधैं देखाउनु पर्छ?
रंगहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ?
पृष्ठभूमिहरू सकेसम्म विचलित हुनुपर्छ?